ပြည်သူ့စက်ဘီးစီးသူများအတွက် E-Bike Summit 2019: ဥပဒေများ၊ eMTB လက်လှမ်းမီမှု၊ eBiking လေ့လာမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အခြားအရာများ!
နောက်ဘက် drive ကို
စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်လူငါးကြိမ်မြောက် E-Bike ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်တက်ရောက်သူအများဆုံးဖြစ်သော်လည်းကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
2019 သည်လျှပ်စစ်စက်ဘီးများစွာအတွက်အလုပ်များသည့်နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီတစ်ရက်တာပွဲအတွက်ဖုံးအုပ်စရာများစွာရှိသည်။
ယခုနှစ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို California ရှိ Carlsbad ရှိ Canyon Bicycles USA ဌာနချုပ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီ E-Bike Summit အစီရင်ခံစာကိုနှစ်သက်ပါ။
People for Bikes မှ Morgan Lommele (ဘယ်ဘက်) နှင့် Larry Pizzi (ညာ)
ပြည်သူ့စက်ဘီးများအတွက်ပြည်သူ့ရေးရာပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာမူဝါဒဒါရိုက်တာ Morgan Lommele သည်နောက်ဆုံးပေါ် e-bike ဥပဒေအောင်မြင်မှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
3 Class eBike ဥပဒေကိုလက်ခံကျင့်သုံးမှုသည် 2019 ခုနှစ်တွင်ပြည်နယ်အရေအတွက်၏နှစ်ဆတိုးလာခဲ့သည်။
၅ နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ပြည်နယ် ၂၃ ခုသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည့် e-bike မော်ဒယ်လ်ဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ပြည်သူလူထုအတွက်စက်ဘီးစီးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်မှာလက်ရှိပြည်နယ် ၂၃ ခုသို့ပြည်နယ် ၁၄ ခုထပ်တိုးရန်ဖြစ်သည်။
ထိုပြည်နယ်များမှာ Alabama, Alaska, Florida, Kentucky, Iowa, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, Oregon, South Carolina, West Virginia နှင့် Virginia ။
People for Bikes ကရှင်းလင်းပြတ်သားသော3Class eBike ဥပဒေရှိသည့်ဖော်ပြချက်များအရ eBikes သည်ရောင်းဝယ်မှုကိုနှစ်ဆကျော်ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ eBikes သည်မည်သည့်နေရာတွင်စီးနင်း။ စီးနင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကုန်သည်များအားရှင်းလင်းစွာရှင်းပြပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
2019 သည် eScooters ၏အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာရရှိခြင်းနှင့်အတူ micromobility အတွက်ကြီးမားသောနှစ်ဖြစ်သည်။
eScooter မြင်းစီးသူရဲများနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုလုံခြုံသောအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ထောက်ခံအားပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စသည့်စက်ဘီးများ၊ eBike, eScooters, pedestrians များအကြားလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများကိုစီးနင်းလိုကြသည်။
People for Bikes သည်ပိုကောင်းသောအခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရန်အတွက် eScooter ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေပြီး၊ 'စက်ဘီးနှင့်မတူပဲကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများကဒေသတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကစီမံခန့်ခွဲရမည်။ '
2019 ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာရိုးရာစက်ဘီးစီးရန်အတွက် National Parks နှင့် BLM မြေများရှိ eBikes ကိုအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေသခံမြေယာမန်နေဂျာများအနေဖြင့်မည်သည့် eBike အမျိုးအစားများကိုရိုးရာစက်ဘီးလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်ခွင့်ပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ People for Bikes သည်ဒေသခံမြေယာမန်နေဂျာများအားလျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးရန်သင်စိတ်ဝင်စားမှုအကြောင်းပြောဆိုရန်နှင့် eBikes ဆိုတာဘာလဲကိုပြသရန်သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြံပြုသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားအထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ၄၀၀ ကိုယခု eBike တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသန့်ရှင်းသောကားများဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်မှု ၄ အစီအစဉ်အားလုံးတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ 'Clean Cars4All' သည် ၀ င်ငွေနည်းပါးသောကယ်လီဖိုးနီးယားယာဉ်မောင်းများအား၎င်းတို့၏သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဖျက်သိမ်းရန်ကယ်လီဖိုးနီးယားရာသီဥတုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့်မက်လုံးများကိုထောက်ပံ့ရန်အာရုံစိုက်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုမြင့်မားသောကားတစ်စီးနှင့်၎င်းကိုသုညသို့မဟုတ်နီးပါးသုညထုတ်လွှတ်မှုအစားထိုးခြင်းဖြင့်အစားထိုးပါ။ '
အခြားပြည်နယ်များကလည်း eBike ၀ ယ်ယူမှုမက်လုံးများကိုလည်းပေးနေသည်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ။
အာမခံပေးသူအားလုံးသည် eBikes ကိုဖုံးလွှမ်းမည်မဟုတ်သောကြောင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအာမခံရန်မှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းမှအဖွဲ့ဝင်များသည်လျှပ်စစ်စက်ဘီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးအာမခံပေးသူများအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
တက်ရောက်သူအချို့၏အကြံပေးချက်မှာ People for Bikes သည်အာမခံကိုပေးကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ Velosurance သည်လျှပ်စစ်စက်ဘီးအာမခံကိုပေးသည်။
People for Bikes for Policy Council မှ Alex Logemann မှသမိုင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်တရုတ်၊ ဥရောပနှင့်ဂျပန်တို့အတွက်အကောက်ခွန်များ၏အနာဂတ်အကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်။
တရုတ်အကောက်ခွန်နှင့် ပတ်သက်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအချို့ရှိသော်လည်းတင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်သောအခါဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်အထိအပြောင်းအလဲမရှိသေးပါ။
ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်တို့သည်အောက်တိုဘာလတွင်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းစက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများအပေါ်အခွန်လျှော့ချသင့်သည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် Inspiration ဖြင့် E-Bike Channel ကိုကြီးထွားစေခြင်း
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုTheရိယာရှိ New Wheel eBike ဆိုင်များကိုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူ Karen Wiener ကအမေရိကန်ရှိလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်တိုးတက်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမည်သို့အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုသူမ၏အကြံဥာဏ်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။
သူမကဒေသခံကုန်သည်တွေက eBike မြင်းစီးသူရဲတွေအကြောင်း eBike ကုမ္ပဏီတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတာကိုသူသတိပြုမိခဲ့တယ်။
ကာရင်သည်သူမ၏သမီးငယ်အိုင်ဒါကိုသယ်ဆောင်စဉ်လျှပ်စစ်ကုန်တင်စက်ဘီးဖြင့်အချိန်ပြည့်ခရီးနှင်နေသည်။ သူမသည်နေ့စဉ်အသွားအပြန်မှများစွာသင်ယူခဲ့ပြီး eBike အတွေ့အကြုံကိုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်ရန် eBike ကိုတတ်နိုင်သမျှများများအသုံးပြုရန်စက်မှုလုပ်ငန်း၌ပါ ၀ င်သူအားလုံးကိုအားပေးခဲ့သည်။
New Wheel သည်လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုမော်တော်ကားများအစားအခြားနေရာတစ်ခုအဖြစ်အာရုံစိုက်ပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒေသရှိစက်ဘီးအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုလုပ်ဆောင်သည်။
eMTB Update ကို
eMTB ၏ eBike အစိတ်အပိုင်းသည်ဆက်လက်တိုးတက်နေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်ပြည်နယ် ၂၃ ခုရှိသည်။ eMTB ကို motor အချို့မဟုတ်သောလမ်းကြောင်းများ၌ခွင့်ပြုသည်။
ထိုပြည်နယ်များမှာ Alaska၊ Arkansas၊ Colorado၊ Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri၊ Wyoming ။
လူတွေအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်စွန့်စားမှုစီးနင်းရန်လမ်းညွှန်နှင့်အတူ eMTB လမ်းကြောင်းမြေပုံရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော eMTB လက်လှမ်းမီမှုကိုထောက်ခံရန် eMTB Trail Etiquette လမ်းညွှန်နှင့် eMTB Playbook ကိုလည်းသူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အချို့သောအရေးကြီးသောအလုပ်များမှာဒေသခံမြေယာမန်နေဂျာများကို eMTB များနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ People for Bikes သည်မြေယာမန်နေဂျာနှင့်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံရန်အကြံပေးသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ခွင့်ပြုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် eMTB ၏စွမ်းရည်ကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Joe Vadeboncoeur သည် Trek အကြီးတန်းမန်နေဂျာဟောင်းဖြစ်ပြီးယခုစက်ဘီးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်ထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ မြေယာမန်နေဂျာများအနေဖြင့်လက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်ကူညီရန် eMTB ၏သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုသူကယုံကြည်သည်။
Mr. Vadeboncoeur မှဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်လေ့လာမှုများနှင့်မေးခွန်းအချို့မှာ -
●နိုင်ငံ၏မတူညီသောနေရာများနှင့်မြေဆီလွှာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးမှ eMTB ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း၏သက်ရောက်မှုလေ့လာမှုများစွာ
# eMTBs နှင့် MTBs များသည်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနိုင်ပါသလား။ လမ်းကြောင်းအချို့ပြောင်းရန်လိုပါသလား?
# လမ်းကြောင်းအချို့ကိုမော်တာမပါသောလမ်းကြောင်းများအတွက်ရန်ပုံငွေဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ eMTB တွေကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုမလဲ။
●ပါဝါကန့်သတ်ချက်နှင့်အမြင့်ဆုံး assist speed ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
# လမ်းကြောင်းပေါ်မြင်းစီးသူရဲများတိုးမြှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်နည်း သို့ဆိုလျှင်ရန်ပုံငွေသည်မည်သည့်နေရာမှလာမည်နည်း။ အရောင်းအခွန်လား၊ လိုင်စင်ကြေးလား။
တင်ပြမှုအပြီးတွင် Mr. Vadeboncoeur ၌မြေယာမန်နေဂျာများ၊ IMBA ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆန်ဒီယေဂိုတောင်တန်းစက်ဘီးအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များသည်ပရိသတ်များမှသူတင်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။
NPD အုပ်စုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Retail Trends နှင့် E-Bike အရောင်းပြသမှုကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၊ သူတို့၏အချက်အလက်များအရလျှပ်စစ်စက်ဘီးရောင်းချမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
စက်ဘီးလုပ်ငန်း၏အခြားအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက eBikes သည်အလွန်ထင်ရှားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
E- စက်ဘီးလေ့လာမှုအားဖြင့် Mobility ကို
OTREC & PSU မှ John MacArthur
John MacArthur သည် TREC Portland State University ရှိရေရှည်တည်တံ့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။
'' လျှပ်စစ်စက်ဘီး '(e-bikes) သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကားများအစားထိုးအသုံးပြုပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ထိရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ University of Tennessee၊ Knoxville၊ Portland State University၊ Pittsburgh တက္ကသိုလ်နှင့် Bosch E-Bike Systems မှသုတေသီများသည် National Science Foundation မှရန်ပုံငွေများကိုရရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည်စစ်မှန်သောခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ထိုရွေးချယ်မှုများ၏ရေရှည်တည်တံ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်တကူဖြန့်ကျက်နိုင်ခြင်း၊ ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် e-bike နည်းပညာနှင့်စမတ်ဖုန်းအာရုံခံကိရိယာစွမ်းရည်များဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတီထွင်နေသည်။
နောက်ထပ် ထပ်မံ၍ '' e-bike အချက်အလက်များကိုခြေရာခံခြင်း၏လက်ရှိကျင့်စဉ်များသည်မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူထံမှကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည် passive data စုဆောင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောခရီးသွားစစ်တမ်းများကိုပြုလုပ်ရန်စမတ်ဖုန်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စက်သင်ယူမှု algorithms ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် e-bike အသုံးပြုမှုတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အကြီးဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံး Datasets ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ '
၎င်းတို့သည် 'သင်၏ခရီးကိုသွားရန်၊ အဆင်မပြေရန်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုထံသွားရန်' သင်၏ e-bike ကို သုံး၍ အနည်းဆုံး iPhone 10 နှင့် Bosch ပါဝါ eBike ရှိသင့်သောသင်တန်းသားများကိုတက်ကြွစွာရှာဖွေကြသည်။
Canyon တွင်“ လက်ရှိတွင်ယူအက်စ်အေတွင်မရရှိနိုင်ပါ” ဟူသောမှတ်စုပါသောဥရောပစျေးနှုန်းဖြင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးနှစ်စီးပြသခဲ့သည်။ ..
ဤသည် Canyon Spectral ဖြစ်ပါသည်: 8.0 အပြည့်အဝရပ်နားမှုသည် Shimano Mid-drive ကို။
Shimano E8000 အလယ်အလတ်မောင်းစနစ်ကို Semi Integrated Frame Battery ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
The Canyon Roadlite: 9.0 တွင်အနည်းငယ်သောလမ်းဘေးစတိုင်ယာတာယာများပါသောကျောက်စရစ်ပုံစံ eBike ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်ဘက်ထရီနှင့်မော်တာတို့ပါ ၀ င်သည့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော drive ယူနစ်နှင့်အတူ Fazua အလယ်တန်း drive စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
E-bike သတင်းများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့်ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
post အချိန်: ဇန်နဝါရီ -9-2020
ပွင့်လင်း: 8:00 pm တွင် - ပိတ်: 17:00 pm တွင်
ဤ template သည် Petro - Industrial HTML Template ဟုခေါ်သောစီးပွားရေးအမျိုးအစားများအတွက်အသေးစားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ template ၏ပိုလျှံ HTML / CSS ကိုအသုံးပြုနေသည်ရှိခဲ့သည်။
လိပ္စာ: 990-2908 Jianghai West Road, Liangxi District, Wuxi, Jiangsu, China
eBike News: eCargo အစားထရပ်ကားအစား eBi ...
ပြည်သူ့စက်ဘီးစီးသူများအတွက် E-Bike Summit 2019: ဥပဒေများ ...